प्रकाशित: शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, १९:१९:०० नेपाल समय
काठमाडौं - भोलि (शनिबार) सुरु हुने काठमाडौं मेयर कप क्रिकेटमा केही प्राविधिक कारणहरुले विशेष बन्ने भएको छ।
क्यानका क्रिकेट व्यवस्थापक विनोद दास भन्छन्, ‘यो च्याम्पियन्स लिग हो, उत्कृष्ट खेलाडीहरुको ‘टफ’ प्रतिस्पर्धा – कम्पिटिसन एमङ द बेस्ट !’
भोलि (शनिबार) सुरु हुने ‘टफ’ प्रतिस्पर्धा पाँच टिमबीच हुनेछ। महामारीका करण लामो समय खेलबिहीन बनेका खेलाडीलाई प्रोत्साहन दिन टिम बढाउन सकिन्थ्यो। तर भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री कपकोभन्दा मेयर कपमा टिमको संख्या आधा मात्र छ।
व्यवस्थापक दास भन्छन्, ‘क्वालिटी मेन्टेन गर्नका लागि पाँच टिममात्र बनाइएको हो। किनकी राष्ट्रिय टिमका खेलाडीजति चार टिममै अटाइसक्नु भएको छ। त्योबाहेकका जो योङ ट्यालेन्ट खेलाडीहरु छन्। उनीहरुलाई समेटेर अर्को टिम काठमाडौं मेयर–११ तयार गरिएको हो।’
मेयर कपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै टिम उत्कृष्ट रहेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बुझाइ छ। यसबाहेक अर्को टिम बनाएको भए फितलो हुन्छ कि ! भन्ने आशंका रहेको कारण प्रतियोगितालाई उच्चस्तरको बनाउन पाँच टिम मात्र सम्मिलित गरेको दास बताउँछन्।
प्रतियोगितालाई थप विश्वासनीय र सुरक्षित बनाउन खेलाडीको बीमा गरिएको छ भने कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन क्यानले महानगरसँग सम्झौताको तयारी गरेको क्यानका सचिव अशोकथान प्याकुरेलले बताए।
प्रतियोगिताको मेडिकल पार्टनरका रुपमा नर्भिक अस्पतालाई राखिएको छ। प्रतियोगिताका खेलहरु त्रिवि मैदान र मुलमानी रंगशालामा हुनेछन्।
कोरोनाको महामारीका कारण काठमाडौंको महानगरले खेलकुका लागि छुट्याएको रकम खर्च हुने सकेको थिएन। त्यही रकम महानगरले एकमुष्ठ ५० लाख क्यानलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक विकास विभाग प्रमुख दीपक अधिकारी बताएका छन्।
‘महानगरले क्यानलाई सहयोग गर्ने योजना नै थिएन। काठमाडौंभित्रका अन्तर नगर प्रतियोगिता गर्ने योजना थियो तर सबै नगरसँग टिम नभएकाले त्यो प्रतियोगिता सम्भव भएन क्यानलाई एकमुष्ठ रकम दिएका हौँ,’ विभाग प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अब आउँदो वर्ष पनि सायद यो कार्यक्रम रहला।’
महानगरले दिएको रकममा क्यानले आन्तरिक स्रोतबाट रकम थप गरेर प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको हो। तर यही प्रतियोगिता भव्यताका साथ सफल गर्ने क्यानको उद्देश्य रहेको सचिव प्याकुरेल बताउँछन्।
मेयर कपमा देखिने नयाँ कुरा चाहिँ काठमाडौं मेयर–११ को टिम हो। जहाँ पीएम कपको सेमिफानलमा पुग्न नसकेका तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरु छन्।
क्यानका सचिव प्याकुरेल भन्छन्, ‘काठमाडौं मेयर–११ का लागि अस्ति पीएम कपमा देशभरिबाट आएका उत्कृष्ट १५ खेलाडी छनोट गरेका छौं।’
उनले थपे, ‘पीएम कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीलाई राष्ट्रियस्तरमा आइपुग्नका लागि समय लाग्दथ्यो। तर मेयर कपले खेलाडीलाई राष्ट्रियस्तरमा पुग्न अर्को मौका दिएको छ।’
र अझ रोचक त के छ भने, त्यो पाँचौ टिमको कप्तानी ग्लोबल स्टार सन्दीप लामिछानेले गर्नेछन्।
सन्दीपले २०१८ को डिसेम्बरयता नेपाली घरेलु लिग खेलेका छैनन्।
वर्षको अधिकजसो समय विदेशी लिगमै व्यस्त रहने लामिछाने झण्डै साढे दुई वर्षपछि नेपाली लिग खेल्न लागेका हुन्।
उनले पछिल्लो पटक एभरेष्ट प्रिमियर लिग खेलेका थिए। त्यसयता उनले बिग ब्यास, ग्लोबल टी–२०, आईपीएल, पीएसएललगायत विश्वस्तरीय फ्रेन्चाइज लिग खेलिसकेका छन्।
यसअघि सन्दीप पाकिस्तान सुपर लिग(पीएसएल) गएको समयमा काठमाडौं मेयर–११ टिममा १५ खेलाडी थिए। अब एक जना थपिएर १६ जना हुने प्याकुरेलले बताए।
उनी थपिएपछि घरेलु फुटबलको रौनक अझ थपिएको छ। यता पछिल्लो पीएम कपमा उपस्थित हुने नसकेका कुशल मल्ल, करण केसी र सोमपाल कामी पनि यो प्रतियोगितामा उपलब्ध हुनेछन्।
बागमतीका पारस खड्का पनि पुरा सिजनका लागि उपलब्ध रहनेछन्।
पहिलो पटक म्याच फी
क्यानले काठमाडौंमा आयोजना गरेका प्रतियोगितामा पहिले म्याच फी दिने व्यवस्था थिएन। तर यो प्रतियोगितामा म्याच फी दिइने भएको छ।
‘नयाँ कुरा चाहिँ हामीले खेलाडीलाई म्याच फि दिने भनेका छौँ। खेलाडीले हरेक खेलमा दुई हजार म्याच फी पाउनेछन्,’ सचिव प्याकुरेलले भने।
यसअघि काठमाडौंमा हुने केही प्रतियोगितामा भ्यालीबाहिरबाट आउने खेलाडीले भत्ता पाउने गरेका थिए। तर भत्ताको कार्यक्रम पनि सँधै कार्यान्वयन भने भएको थिए।
त्यसकारण यो कामले खेलाडीलाई थप प्रोत्साहन हुने क्यानको बुझाइ छ। यसअघिका प्रतियोगिताका खेलाडी कारबाही गर्नु परे भत्ता काट्ने अवस्था नभएपछि प्रतियोगिताका रेफ्रीले मेरिट पोइन्ट घटाउने गरिन्थ्यो।
क्यानले विजेतालाई पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ भने उपविजेतलाई तीन लाख दिनेछ।
त्यस्तै म्यान अफ दि सिरिज ५० हजार, बेस्ट बलर र बेस्ट ब्याट्स्मेनलाई समान २५÷२५ हजार र हरेक पटकको म्यान अफ दि म्याच बनेका खेलाडीले पाँच हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
बजेट कम हुँदा गाह्रो
प्रतियोगिताका केही कमजोर पाटाहरु पनि छन्। लिग चरणका क्रममा प्रतियोगितामा रेस्ट डे भने छैन। सुरुवाती ६ दिनमा दुई–दुई खेल छन्।
त्रिविको मैदानमा हुने खेल मात्र टेलिभिजनमा लाइभ हुनेछ।
मुलपानी मैदानमा बागमती प्रदेश, काठमाडौं मेयर ११ र पुलिस क्लबले समान २÷२ खेल खेल्नेछन्। पीएम कपको फाइनल खेलेका एपीएफ र आर्मीले भने १/१ खेल मुलपानीमा खेल्नेछ।
मुलपानी मैदानको व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारण समय समयमा आलोचना पनि हुँदै आएको छ। खेलाडीले पनि मैदान उच्चस्तरको नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
क्यानसँग उपलब्ध भएका सबै पूर्वाधार व्यस्त राख्न दुवै मैदान प्रयोग गर्नुपरेको जेनेरल मेनेजर रौनक मल्ल बताउँछन्।
यसलाई प्रस्ट पार्दै सचिव प्याकुरेलले भने, ‘बजेट कम भएकाले दुई ठाउँमा गर्नुपरेको हो। आठ दिनमा सकिने खेल एकैठाउँमा गर्दा त १२ दिन लाग्नेभयो नि ! यसले खर्च बढ्यो।’
तर लगातार खेल हुँदा खेलाडीलाई चोटको सम्भावना भने धेरै हुन्छ। त्यसमाथि एक टिममा १५ खेलाडी मात्र रहँदा बेञ्चमा रहने खेलाडीको संख्या पनि निकै कम छ।
तर यसअघि १४ जनाको मात्र टोलि हुने गरेको यो वर्षबाट १५ जनोको टोली बन्नुलाई क्यानले उपलब्धी ठानेका बताएको छ।